Ukubhekana ngqo nesiqhwaga sansukuzonke ukhuvethe - Bayede News
by nguSolwazi uNombulelo Magula
nguSolwazi uNombulelo Magula
USolwazi uNombulelo Magula uyiNhloko Yezokwelashwa Kwezifo eNyuvesi YaKwaZulu-Natal.
Kulo mbhedukane wokhuvethe, ngaqala ngaba nenkolelo yokuthi mina nomndeni wami ngeke lisihaqe igciwane. Ingani bengihlenga amakhulu eziguli ezinokhuvethe, ngelapha inqwaba ngempumelelo (yize abanye bebesishiya), ngisebenza eMnyangweni Wezempilo esifundazweni iKwaZulu-Natal naseMnyangweni Wezempilo Kuzwelonke kusukela lwaqala lolu bhubhane, futhi mina nomyeni wami sisebenza ezindaweni ezibucayi nezinobungozi ezimbili kwezokulapha izindlebe, amakhala nemiphimbo kanye nezemithi.
Sakwazi ukucusha amahlandla amabili okuguliswa wukhuvethe iSARS-CoV-2. Ngavele ngazitshela ukuthi senze konke ukuqikelela okufanelekile. Ulwazi lwami lokulawula ingculazi lwangenza ngazizwa ngikuhlomele ukuba nginikele ekuthuthukisweni kwamaqhingasu okubhekana nokhuvethe.
Mayelana nokusebenza koMnyango Wezempilo KwaZulu-Natal uthuthukise wabuye wahlela kabusha okokusebenza ukuze kubhekwane ngqo nokulawula ukhuvethe. KuMasipala eThekwini isibhedlela iClairwood kwaba ngesikhulu esahlelwa kabusha ukuze kulawulwe ukhuvethe. Lokhu kuhlelwa kabusha kwakuqondwe ukuguqula isibhedlela kulokhu ekwelapheni nasekusimamiseni okujwayelekile ukuze sibe yisibhedlela esikwazi ukulawula iziguli ezinezifo ezibucayi.
Ngesikhathi sokuhlela kabusha ingqalasizinda yezinga eliphezulu lobuchwepheshe kwadingeka ukuba kuhambisane nokwezisebenzi zibe namakhono afanelekile okulawula iziguli ezinezifo ezibucayi nezixakile. Lokhu kungoba ukhuvethe luhambisana nezinye izifo ezithi ekulawulweni kwazo kube nomthelela ekulawulweni kokhuvethe luqobo.
Yingakho kunesidingo sokuthi izisebenzi zihlonyiswe ngamakhono okulawula ngokufanele izifo ezihambisana nokhuvethe. Ngaphezu kwalokho, impahla yokusebenza yokulawula amazinga ehlukile okhuvethe, izifo ezihambisana nalo kanye nokuqonga kwesifo kwadingeka ukuba itholakale. Yize kukhona lezi zithiyo, ukuqeqeshwa okufanelekile ukusebenzisa lezi zinsiza kwatholakala esibhedlela esinezinsiza zezinga eliphezulu ezivimbela ukutheleleka nokulawula ingqalasizinda ekulawuleni isifo esithelelana ngokwezinga eliphezulu njengokhuvethe.
Ngaphezu kwalokho, kunesikhala esanele esivumela izinsiza kulabo okufanele bangahlangani nabanye besaxilongelwa ukhuvethe belinde imiphumela, nalabo bangabodwana osekuqinisekisiwe ukuthi bahaqekile. Abahlaliswa ngabodwa banezinsiza zomuntu onezimpawu zokungabambeki kakhulu noma ongenazo izimpawu okusiza ekuhloleni masinyane ukubona ukuthi isifo siyaqhubeka noma kukhona okuxakayo osekuqala Ikakhulukazi ngoba ukushesha kokutholakala kwenza kube nemiphumela emihle. Ubunzima besifo buhlolwa ngokwezokwelapha ukuze kubonakale ubunzima bokhuvethe kuzo zonke izinhlelo zezicubu.
Ukusebenza kubandakanya ukuhlola ezinye izifo ezingabakhona ukuze kukwazi ukulawuleka lezo zifo nezinkinga ezihambisana nazo. Izinsiza zihlinzekwa ubusuku nemini futhi inkundla yobuchwepheshe bedijithali kwezempilo buyasetshenziswa ekuhlelweni kokwelashwa kweziguli ngezinsiza ezifanelekile lapho kudingeka khona. Okunye okuba kuhle ngukuba khona kwamandla okunqandeka kokutheleleka emalungwini omndeni lawo angethelelekile kanye nakwabanye abantu bomphakathi. Ngaphezu kwalokho, le ndawo isithole ukuthi ukhuvethe luhlukumeza ingqondo kulabo abathelelekile (yize lokhu kuqashiwe) ngalokho seyibeke eqhulwini ukuhlinzeka iziguli ngendawo yokuphumula ngesikhathi zelashwa kulawulwa nesifo.
Nokho ngesikhathi ithuba lokugoma livuleka nganginongabazane. Engangikucabanga wukuthi ngisebenze kuzo iziguli ezinokhuvethe kubandakanya nokuziphefumulela kuzona ngizihlenga futhi ngezwa nazo ziphefumulela kimina ngahlala angaze ngatheleleka. Ngagcina ngokuthi isexwayiso sokuzivikela esisemawadini nasele ukuba ngiphephe. Ngaqala ngabhekisisa ukungabi nasiqiniseko semithelela engadingeki yemigomo engaziwa ngiqhathanisa nokwenzekayo kokuthi ngihleli ngivikelekile esibhedlela.
Abomndeni nami besiqikelela konke okumayelana nokuziphatha ngokokhuvethe futhi sahlala siphephile. Ukubuka nxazonke okungenzeka kwangishiya nomuzwa wokuba manqika ukugoma. Ekugcineni ngivumele umyeni wami ukuba enze isinqumo ngomndeni, ngagoma.
Ngacabanga ukuthi ngibone okubi kakhulu ngokhuvethe ngesikhathi sokuqonga kwehlandla lesibili lobhubhane kuze kube ngihlangabezana nokwenzeka emasontweni amabili okugcina kuNtulikazi wezi-2021 lapho ngisebenzela khona. Iziguli zazifika ngobuningi bazo zibambeke kakhulu kwaswelakala abaningi esikhathini esifushane kwesake sahlangabezana nakho. Kulobo bumnyama ngatholakala ukuthi nginokhuvethe yize bengiziqikelela ngayo yonke indlela. Angikwazi ukuthola ukuthi ngatheleleka kuphi, ekhaya noma emphakathini ngabuye ngathelela abasekhaya. Kulukhuni ukuqagula lapho othole khona ukutheleleka.
Ezami izimpawu zazihlukile kukho konke engangifundisa ngakho nakulezo zeziguli zami. Ngesikhathi kufanele ngamukelwe esibhedlela, ngaya esibhedlela sami iClairwood. Ngiyaziqhenya ngethimba lasesibhedlela iClairwood hhayi njengesisebenzi kodwa futhi nanjengesiguli saleli thimba. Onke amalungu ethimba enza umsebenzi wawo ngokuzimisela kusukela kozohlanza aphake kuye kubahlengikazi abahlala behlola okuqhubekayo ezigulini zabo nokuthola abakhala ngakho, odokotela abahlolayo bathathe izinqumo kwezokwelapha babuye bakweseke. Ngakuthokozela kakhulu ukwesekwa engakuthola ethimbeni lami ababengiphathela amanandi nokudla okuphekwe ekhaya ngesikhathi ngisesibhedlela. Ukwesekwa okungayiwa engakuthola emphakathini welekelela umndeni wami ezikhathini ezinzima.
Ngifunde ukuthi ukubhekana nobhubhane ukhuvethe kusemqoka ukubandakanyeka komphakathi kusemqoka kulabo abangenakho ukwelekeleleka okulindelekile. Imibandela yemvalelwakhaya kufanele ibhekelele ukungenelela kulabo abanganandawo yokuhlala. Ubhubhane kufanele lube yisifundo esinzima ukubhekana nobubha, imfundo, indawo yokuhlala kanye nesiqiniseko sokuthola ukudla. Ubumqoka bokuqhelelana lapho iningi labantu lihlala emijondolo kufuna ukuba kubuye kubhekisiswe masinyane.
Ukulandelela ngokuthintana nokuhlolisisa, nokuhlaliswa ngawedwana kufanele kukhuthazwe ngesikhathi ukungenelela kusabhekisiswa. Leli qhingasu lizosiza ekuqinisekiseni ukuthi labo abathelelekile bahlonzwa masinyane, baxilongwe kuhlolwe konke okungaba yizinkinga noma ezinye izifo ezihambisana nokhuvethe futhi banakekelwe kuseva. Leli qhingasu kufanele likwazi ukunciphisa ukwanda kokutheleleka nokufa emiphakathini, ngalokho kunciphe amandla okuba khona kwamanye amagagasi okhuvethe.
nguSolwazi uNombulelo Magula Oct 8, 2021